Jabuuti oo taageero u muujisay Xukuumadda Itoobiya ee dagaalka kula jirta TPLF - Awdinle Online
Jabuuti oo taageero u muujisay Xukuumadda Itoobiya ee dagaalka kula jirta TPLF
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay Xafiiskiisa la taliyaha gaarka ah ee Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo lagu Magacaabo Mr Guido Andargachou, kaas oo farriin Amniga la xiriirta ka siday Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.
Kulanka ayaa waxaa ay uga wada hadleen xaalada Itoobiya oo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya Ciidamada Federaalka Itoobiya & xoogaga TPLF, dagaaladaas oo geystay khasaaro dhimasho & dhaawac ah iyo barakaca kumanaan Ruux.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti oo War kasoo saartay Kulanka ayaa sheegtay in Dowladda Jabuuti ay taageereyso Xukuumadda Abiy Axmed, balse ay ku baaqeyso in wax walba wada-hadal lagu xaliyo.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti
Jamhuuriyadda Jabuuti waxay si aad ah ula socotaa xaaladda isku dhaca gudaha ee Itoobiya tan iyo 4tii Novembar 2020, oo ah isku dhac hubaysan oo u dhexeeya Ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya iyo kooxda TPLF ee gobolka Tigray.
Jabuuti waxay si buuxda u taageereysaa midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka iyo Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Itoobiya.
Sidoo kale, Dowladda Jabuuti waxay xaqiijisay in xukuumadda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed Ali ay tahay tan kaliya ee dammaanad qaadaysa midnimada dhuleed ee Itoobiya.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo howlgal ku qabatay Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab
Next articleKulamo looga hadlayo Doorashooyinka Soomaaliya oo ka socda Nairobi